eNasha.com - अठारौँमा पक्डाउ !
अठारौँमा पक्डाउ !
देशकै प्रख्यात भिडियो निर्देशक आलोक नेम्वाङ अठारौँमा पक्डाऊ ! शीर्षक सुन्दा अचम्म लाग्यो होला, होइन त ? तर सही हो, नेम्वाङले यसअघिका १७ जना चलचित्र निर्माताले निर्देशक गर्न राखेको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरे पनि यस पटक भने उनी उम्कन सकेनन् । उनले पाएको अठारौँ प्रस्तावमाथि उनले चूपचाप स्वीकार गर्नैपर्‍यो !
राजधानीमा स्तरीय सिनेमा हलमा स्तरीय मनोरञ्जन पस्किने उद्देश्यका साथ पाँच वर्षघि स्थापित भिजन क्वेष्ट तथा यसको भगिनी संस्था क्वेष्ट इन्टरटेन्मेन्टले कागबेनीपछि निर्माण गर्ने अन्य दुइ चलचित्रमध्ये एउटाका लागि निर्देशक नेम्वाङलाई छनोट गरेको हो । उनले निर्माण गर्ने चलचित्र प्रेमकथामा आधारित हुने बताइएको छ । यता उनको निर्देशकीय छनोटलाई क्वेष्ट इन्टरटेन्मेन्टले समेत पुष्टि गरेको छ । उक्त संस्थाका नकिम उद्दीनले इनशाडटकमलाई भने- 'उहाँ हाम्रो रुचिको निर्देशक हुनुहुन्थ्यो, उहाँले रुचि देखाउनु भयो । 'साइन' गर्न पाउँदा हामीलाई खुशी लागिरहेको छ ।'
आलोकका बारेमा रोचक के छ भने अर्का भिडियो निर्देशक सिमोश सुनुवारले निर्माण गरिरहेको चलचित्र 'मिसन पैसा'मा उनले पनि अभिनय गर्ने भएका छन् । उनले चलचित्रमा अभिनय गर्ने दोस्रो चलचित्र हो, यसअघि 'नुमाफुङ'मा नुमाको श्रीमानको भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
'मिसन पैसा'मा अर्की एक नायिकाका साथ उनले नृत्यसमेत गर्ने नजिकको श्रोतले इनशाडटकमलाई बताएको छ । उनीसँग नाच्ने नायिका चाहिँ को हुने छिन् भन्ने अहिलेसम्म खुलिनसके तापनि यसका लागि निर्माण पक्षले मेलिना मानन्धरलाई आलोकको विपरीत छनोट गरिन सक्ने बताइएको छ ।
आलोक एउटा राम्रो नर्तकका रुपमा पनि चिनिन्छन् । उनले निर्देशन गरेको पहिलो म्युजिक भिडियो 'लाखौँ पटक मैले कोसिस गरेँ...' (नवीन के. भट्टराई) गीतमा उनले नृत्य समेत गरेका छन् ।
निर्देशक क्या बात ! रोचक कन्ट्रोभर्सी सोच फिल्म फेस्टिबल नवीनता घोषणा पार्टी अभिनेत्री ग्ल्यामर पेज3अभिनेता कार्यक्रम रोमान्स सेक्स सञ्चारकर्मी प्रविधि